💫ကိုဗစ်ကာလ အထူး Promotion💫 ***၁ နှစ်ချုပ်လျှင် အိမ်ငှားဘက်မှ အကျိုးဆောင်ခ လုံးဝမယူပါ*** ☃️☃️ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်; မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ် နေရာကောင်း ပထမထပ် ဟောင်ကောင် 2လွှာပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ - ငှါးရန် - ပုဇွန်တောင် (Pazundaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 6.50 သိန်း (ကျပ်) - R-18934282 | iMyanmarHouse.com
Moe Htut Real Estate ၏ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
💫ကိုဗစ်ကာလ အထူး Promotion💫 ***၁ နှစ်ချုပ်လျှင် အိမ်ငှားဘက်မှ အကျိုးဆောင်ခ လုံးဝမယူပါ*** ☃️☃️ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်; မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ် နေရာကောင်း ပထမထပ် ဟောင်ကောင် 2လွှာပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️
16 Nov 2020 12:41 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
357 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး |	ကြော်ငြာနံပါတ် R-18934282
တိုက်ခန်း ၁ လွှာ2ခန်း 1 ခန်း
6.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)
💫ကိုဗစ်ကာလ အထူး Promotion💫
***၁ နှစ်ချုပ်လျှင် အိမ်ငှားဘက်မှ အကျိုးဆောင်ခ လုံးဝမယူပါ***
☃️☃️ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်; မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ် နေရာကောင်း ပထမထပ် ဟောင်ကောင် 2လွှာပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️
တည်နေရာ ။ ။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်; မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ် နေရာကောင်း ပထမထပ် ဟောင်ကောင် 2လွှာပါ တိုက်ခန်း အငှား
Code No. MH-R 195
အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ ။ ။
15' × 55'
အောက်ထပ် 1 Bedroom
အပေါ်ထပ် Hall Type
ကြိုးဖုန်း 1 လုံး
ကိုယ်ပိုင်ရေစက် / ကိုယ်ပိုင်မီတာပါ
ဘိုထိုင်အိမ်သာ2လုံး
Rent Price = 1 Month = 6.5 Lks (Nego)
အငှားဈေးနှုန်း = ၁ လ = ‌၆.၅ သိန်း (ညှိနှိုင်း)
☆📲☆ မြို့နယ်စုံ လူကြီးမင်းတို့၏ လုံးချင်း ~ ကွန်ဒို ~ တိုက်ခန်း ~ စက်မှုဇုံနှင့်ဂိုထောင် ~ မြေကွက်များ ~ ဟိုတယ်အလုံးလိုက် (ရောင်း/၀ယ်/ငှါး)
ကိစ္စအရပ်ရပ်များအား (ရောင်း/ဝယ်/ငှါး) လိုသော ပိုင်ရှင်/လူကြီးမင်းများအနေဖြင့်
💬Chat box မှသော်လည်းကောင်း
📧Gmail ဖြင့်သော်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံ၍ အမြန်ဆုံးအငှားဖြစ်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ဝယ်ယူလိုသော Customers လူကြီးမင်းများအတွက်...
(၁)ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊
(၃)အရောင်း/အဝယ် ပြီးဆုံးသည်အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးခြင်း၊
(၄) Sp/Gp လွှဲပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်ရှင့်။
မိုးထွဋ် အိမ် ခြံ မြေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
Moe Htut Real Estate
09 25 990 30 67
09 78 7772123
15 ေပ x 55 ေပ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18934282 အတွက် Moe Htut Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Ad Number R-18934282
No.117; 42nd Street; Botahtaung Township
Moe Htut Real Estate ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
💫ကိုဗစ်ကာလ အထူး Promotion💫 ***၁ နှစ်ချုပ်လျှင် အိမ်ငှားဘက်မှ အကျိုးဆောင်ခ...
💫ကိုဗစ်ကာလ အထူး Promotion💫 ***အိမ်ငှားဘက်မှ အကျိုးဆောင်ခ လုံးဝမယူပါ*** ☃️☃️ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်;...
Moe Htut Real Estate ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
☃️☃️ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း ပထမထပ် ဟောင်ကောင် နှစ်လွှာ တိုက်ခန်း...
☃️☃️ #သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နေရာကောင်းမြေညီရောင်းရန်ရှိသည်။☃️☃️Code No. MH-S 192
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ
2.20 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)
ရေကျော် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမ တိုက်ခန်းအငှား (ရုံးခန်းအငှားကို ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။)
5.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၅၂လမ္း အလယ္ ကြန္ဒို ပထမထပ္ ငွားမည္
9 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)
140 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ